Mahdi: Farmaajo sidii guriga cad looga saari inaan ka wada-hadalno soo maaha? - Caasimada Online
Home Warar Mahdi: Farmaajo sidii guriga cad looga saari inaan ka wada-hadalno soo maaha?
Mahdi: Farmaajo sidii guriga cad looga saari inaan ka wada-hadalno soo maaha?
Garowe (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hadal ka jeediyay Shirka Madasha Aragti Wadaaga ee Machadka Heritage oo galabta ka furmay magaalada Garowe ayaa ka hadlay seddax qodob oo kala ah dastuurka dalka, federaalka iyo arrimaha doorashooyinka.
“Heshiisyadii aan wada galnay ku dhaqankooda iyo toos-toosintooda waa wax inoo wada yaalla. Xaalku hadda waxa uu marayaa ‘Ninkaa guriga cad degan ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo niman odayaal ah oo leh war xiligii waa kaa dhamaadee meesha ka soo bax’ yaa u gar-naqi doona?,” ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed.
Isagoo sii gadlayey ayuu yiri, “Si looga baxo guriga cad, inaan ka heshiino soo maaha? Guriga cad sidii loogu sii jiri lahaa, inaan ka heshiino soo maaha? Soo xalku kuma jiro in albaabka laga galo, oo aan daaqadda laga soo gelin?.”
“Miisaaniyadaas waxaa ku jirtay tan doorashada, taasina waxay idin tuseysaa, sida dowladda federaalka ay uga go’antahay inay doorashadu dhacdo, xiligeedana ay ku dhacdo,” ayuu yiri ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed.
“Tan iyo lixdankii waxaa dadka Soomaaliyeed maankooda ku qunfulnaa dowlad Soomaaliyeed oo xoog badan oo Wajeer iyo Wardheer u heeseysa, marka nooca federaalka ee aan qaadaneyno waxa uu u baahanyahay inaan abla-ableyno, si dowladnimadeenu ay u saldhigto,” ayuu yiri Mahdi Guuleed.